Lauren RAJAOBELINA · Novambra 2017 · Global Voices teny Malagasy
Lauren RAJAOBELINA · Novambra, 2017
Lahatsoratra farany an'i Lauren RAJAOBELINA tamin'ny Novambra, 2017
Afrika Mainty30 Novambra 2017
"Raha toa ka tsy misy fahafatesana, tsy misy fanolànana, tsy misy na inona na inona, dia tsy ho avy aty ianareo khawajas [vahiny] [...] Paikady fampiasan'ny mpikomy izany."
Zimbaboe: Fanontaniana Mikasika Ny Fitsaràna sy ny Fanoherana Tsy Tonga Hatramin'ny Farany
Afrika Mainty16 Novambra 2017
" Matokia ianareo, [...] fa na teren'ny fitsarana hihemotra aza ny governemanta, tsy hiraharaha izany ry zareo, alainy amin'ny hery ny toeram-piompiana raha ilaina izany."
Afrika Mainty12 Novambra 2017
Misy dimy ambin'ny folo ireo mpitoraka bilaogy mavitrika amin'ny teny Kiswahili ary roa tsy mavitrika. Enina ambin'ny folo Tanzaniana ary iray Kenyàna. Mpitoraka bilaogy vaovao maro miteny Kiswahili amin'izao fotoana izao no miasa amin'ny bilaoginy saingy tsy mbola vonona hiseho vahoaka.
Tajikistàna : Nahoana Ny Vehivavy Manambady No Matahotra Ny Rafozany, Na Mbola Alohan'ny Hanambadiany Aza
Azia Afovoany sy Kaokazy03 Novambra 2017
Nandritra ny sivy volana voalohan'ny taona 2017 tany Khatlon irery ihany, any amin'ny faritra atsimon'ny firenena, vehivavy 300 eo ho eo , manambady, no nitaraina noho ny fanararaotana ataon'ny rafozam-baviny azy ireo.